Global Voices teny Malagasy » Nambabo Ny Fon’ireo Media Vaventy Fa Tsy Naharesy Lahatra Ny Mpisera Anaty Aterineto i Fu Ying, Mpitondra Teny Vaovaon’ny Parlemanta Shinoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Marsa 2013 7:35 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika
Voalohany indrindra teo amin'ny tantarany, manana ny mpitondra teniny ny parlemanta ao Shina.
Raha toa izao tontolo izao mifantoka any amin'ny Praiminisitra Shinoa, Wen Jiabao, satria izy nanao fanaovam-beloma farany  teo anoloan'ny Kaongresim-Pirenen'ny Vahoaka  (NPC) tamin'ny 5 Martsa 2013, ny media any amin'ny tanibe koa revo sy babon'ny fe-potoam-pitondran'i Fu Ying, ilay mpitondra teny vaovao, izy nandray ny asany voalohany nitarika tafatafa iray ho an'ny mpanao gazety tamin'io andro io ihany.
Fu, minisitry ny raharaham-bahiny sady masoivoho fahiny tany Angletera, no vehivavy voatondro hitana io toerana io. Zendana tamin'ny fomba mendrika sy ny maha-olona azo ifampiresahana tsara an'i Fu ireo media tao amin'ny tanibe, ary ny tena manan-danja indrindra, ny fihazonany n y toerany manolona an'ni Japana sy ny valinteny matotra nasetriny ireo fanontaniana manahirana.
Saingy ireo mpisera ety anaty aterineto manao jery maika eny antsefantsefan'ny fanamarihany eny dia niahiahy hoe, na eo aza ny fandravàny ny fefin'ny anjara toeran'ny lahy sy ny vavy fahagola, dia mbola mpanao kobaka am-bava tsy misy toy izany i Fu.
“Fu Ying, ny diplaomasian'ny ‘vehivavy henjana’ (dame de fer)”, no mibaiko ny gadona”, hoy ny gazety China Daily nanoratra  :
Fu Ying, mpitondra teny vaovaon'ny NPC nitarika ny tafatafa ho an'ny mpanao gazety natao ny 5 Martsa 2013. (dikasarein'ny fàfana tao amin'ny youku )
Miasa saina i Fu raha toa ireo mpanangom-baovao ka mahafantatra tsara ny [fomba fitantanana tsara-afin'ny tetibola] ka nanazava azy io tamin-dry zareo. Namela namana iray fahiny avy amin'ny CNN aza izy hametraka fanontaniana saingy taminm-bazivazy no nangatahany azy hametraka “iray tsotsotra”. Tsy nisoroka izay resaka mikasika olana izy. Rehefa nanontaniana momba ny fandotoana tontolo iainana ao Shina, nilaza i Fu fa isa-maraina izy no misintona ny lambam-baravarankeliny mba hijery sao misy setroka.
Ny Caijing, gazetiboky miresaka ny ara-bola, dia niarahaba  [zh] azy:
Raha mitaha amin'ilay mpitondra teny tany aloha, hahita an'i Fu Ying ho malefaka sy mora alaina namana kokoa ianao, tsy henjana loatra ary mahay mampita hevitra; miresaka amin'ny fo kokoa, tsy mpamaly faty loatra; valinteny bebe kokoa ho an'ireo fanontaniana, tsy miditra lalina. Sarotra ny hiteny hoe izano tsara ary iza no tsy tsara, saingy namorona fomba ho azy manokana i Fu Ying raha resaka diplaomasia — “Fu Ying mode“, Zavtra iray manampy sy mendrika ho trandrahana. Amin'ny fo tsy miangatra, raha manana karazany maro amin'ny Fu Ying isika, dia mety hanampy an'i Shina hifandray amin'ny tandrefana izany.
Ny Sina Weibo, tranonkala Shinoa fitorahana bilaogy kiritika, malaza ao Shina, dia tondraky ny fanehoankevitra mitongilana manohana an'i Fu. Iray amin'ireo mpampiasa i “Zheng Hongshen” nanoratra hoe  [zh] :
Nahazo ny fon'ireo mpampahalala vaovao avy ao an-toerana sy iraisam-pirenena ny fanombohan'ny fe-potoam-piasan'i Fu Ying amin'ny maha mpitondra teny vaovaon'ny Kaongresim-Pirenana ho an'ny vahoaka azy. Nahoana? Raha ny marina, tsotra kely ny antony, tahaka ny volony manompy volom-batolalaka, tsy manao sarintsariny mihitsy izy, tena tamin'ny fony tanteraka. Nazavainy antony nahatara dimy minitra azy; nampiasa ny teny azy manokana izy rehefa namaly ireo fanontaniana, ary mitsiky mandrakariva fa tsy hoe mikentron'endrika; asehony fa nofo aman-drà isika, fa tsy toy ireny biby manana rà mangatsiaka ireny. Tokony haka an'i Fu Ying ho lesona ireo mpikabary rehetra.
Zhang Shuhong, zokiolona amin'ny fanaovan-gazety, dia naneho hevitra hoe [zh]:
Taorian'ny nijerena ny fandraisan'i Fu Ying ny asany tao amin'ny kaoferansan'ny Kaongresim-Pirenana ho an'ny vahoaka, heveriko fa azoko omena isa 80 izy. Sady tsara fijoro izy no tony. Niresaka mikasika ny fahaverezany tany anaty efitrano tany izy, nitsidika ny havany, ary fitondrany saron-tava rehefa mivoaka, nampidirany resaka mikasika ny tenany manokana teny an-tsefantsefan'ny lohahevitra manan-danja teny, izay nisarika ny mpanotrona hifanakaiky aminy kokoa. Nomeny ho an'ilay namany fahiny tao amin'ny CNN ny fametrahana ny fanontaniana farany, izay tena nanasongadina ny fomba fijeriny tsy mitanila. Ny valin'io fanontaniana io [mikasika ny rafitra politika ao Shina] dia lasa ihany koa ho ny teboka nanan-danja tamin'iny tafatafa manontolo ho an'ny mpanao gazety iny.
Ny fanehoan-kevitr'i Fu momba ny rafitra politika ao Shina dia niteraka resabe tety anaty aterineto satria nisavasava ravina ilay valinteny ireo mpampiasa rehetra. Fu nilaza fa efa nahita làlana hanavaozana ny rafitra politikany i Shina, sy hoe “tsy rariny ary tsy mitombina” ny filazàna fa tsy hankaiza i Shina raha tsy màka tàhaka ny firenena hafa hatao lasitra. Naneho  [zh] ny hadisoam-panantenany i Zhao Shilin,mpanoratra:
Ahoana no hahafahantsika miandrandra zavatra manana ny lanjany avy amin'izay mpitondra teny? Lazain'i Fu Ying hoe rafi-panavaozana miainga amin'ny fihatsaràn'ny tena manokana ny fanavaozana ny rafitra politika. Ity fehezanteny ity monja dia mahafehy ny zotran'ny fanavaozana ara-politika. Ilay ambara fa fanavaozana ara-politika dia tahaka ny hoe fanamboarana ny governemanta ihany. Izay zavatra mahakasikasika ny fibodoan-toeran'ny antoko iray izay nitondra nankany amin'ny kolikoly sy ny tsy refesim-mandidy dia tsy azo kitikitihana. An'arivorivony ny fiandrandràna, fa an'arivorivony koa ny hadisoam-panantenana.
Zhao Xiao, mpampianatr avy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Beijing momba ny Siansa sy ny Teknolojia, nanoratra hoe  [zh] :
Hoy i Fu Ying,: “Ny fomba fijerin'ny Shinoa, ao anatin'izany ny media, dia ny hoe te-hahita an'i Shina ho henjana be ry zareo, indrindra manolona ireo fandranitana.” Diplaomasia io. Ahoana ny momba ny fiatrehana ny olana anatiny? Ny fanarahamaso ny kalitaon'ny ronono, ny fanarahamaso ny fandotoana, ny fanambaràm-pananan'ireo manampahefana, ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety, ary hatramin'ny fanavaozana potilika… mba hanaraka ny fomba fihevitry ny daholobe ve ny governemanta, ary hiasa mavitrika amin'ny famaliana azy ireny? Sa tsy dia ampy loatra ny fomba nentintsika naneho ny fomba fijerintsika mikasika ireny olana ireny?
Yang Hengjun, mpanao gazety, nanoratra  mikasika ny valinteny farany avy amin'i Fu :
Raha mpanao gazety aho, mety omeko fotoana i Fu Ying, ary koa nomeko zara-vintana i Shina, fanotaniana iray no ho apetrako, tiako izy raha manao fampidirana mazava tsara ny atao hoe rafitra kaondresim-bahoaka. Mivandravandra be, ilay endriny misy fotoam-pivoriana roa dia mitovy kely ihany amin'ny any (t)Andrefana, saingy samihafa amin'ny resaka votoatiny. Ny firenena rehetra dia tsy tokony hahay, ary tsy maintsy manazava tsara ny rafitra misy ao aminy, tsy maintsy ataonao izay hampahazava ny fomba fiasan'ny rafitra aty amintsika sy ny hoe mitera-bokatra ve.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/03/08/46567/
 fanaovam-beloma farany: https://globalvoicesonline.org/2013/03/07/chinese-premier-wen-jiabao-gives-farewell-report-to-parliament/
 Kaongresim-Pirenen'ny Vahoaka: http://en.wikipedia.org/wiki/National_People
 nanoratra hoe: http://www.weibo.com/1708739134/zmhoaDunv
 naneho hevitra hoe : http://www.weibo.com/1400156990/zlViifFt0
 nanoratra hoe: http://www.weibo.com/1195818302/zlYH74oGJ